Fihiranan’ny Vavolombelon’i Jehovah—Voadika Amin’ny Fiteny Maro
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mingrelian Norvezianina Ourdou Pendjabi Persianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Umbundu Valencienne Xhosa Yorobà Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Efa sarotra be ny mandika hira iray ho amin’ny fiteny hafa, mainka moa fa ny mandika fihirana iray misy hira 135!
Vitan’ny Vavolombelon’i Jehovah anefa izany. Tao anatin’ny telo taona dia voadika manontolo ho amin’ny fiteny 116 ilay fihiranan’izy ireo vaovao hoe Mihirà ho An’i Jehovah, ary voadika ho amin’ny fiteny 55 fanampiny ny hira 55 amin’io fihirana io. Eo am-pandikana ny azy koa ny fiteny hafa.
Fandikana sy fanoratana ny tononkira
Efa mandika boky ara-baiboly ho amin’ny fiteny 600 eo ho eo ny Vavolombelon’i Jehovah, ary azo jerena amin’ny Internet ny boky amin’ny fiteny 400 eo ho eo. Sarotra kokoa anefa ny mandika fihirana satria mitovy ihany ny feon-kira ao amin’ny Mihirà ho An’i Jehovah fa ny tonony no adika ho amin’ny fiteny maro.
Tsy mitovy amin’ny mandika lahatsoratra amin’ny gazety ny mandrafitra tononkira. Miezaka mamoaka ny hevitra rehetra amin’ny fomba marina tsara, ohatra, ny mpandika teny rehefa mandika ny gazety Ny Tilikambo Fiambenana. Tantara hafa mihitsy anefa ny mandika hira.
Fomba anaovana azy
Somary miova kely amin’ny mahazatra ny fandikana hira satria tokony hisy heviny sy ho kanto ary ho mora tadidina ny tononkira.
Tokony ho tsotra ny firafitry ny teny amin’ny hira fiderana mba ho azon’ilay olona mihira avy hatrany ny dikan’ny fitambaran-teny tsirairay. Tokony hivady sy hirindra tsara ny tononkira sy ny feony, na amin’ny fiteny inona na amin’ny fiteny inona, mba ho toy ny hoe ilay olona mihira mihitsy no miteny an’ilay zavatra hirainy.
Ahoana no nahavitan’ny mpandika teny an’izany? Tsy hoe mandika ny teny tsirairay amin’ilay tononkira amin’ny teny anglisy ao amin’ny Mihirà ho An’i Jehovah izy ireo. Asaina manoratra tononkira vaovao mamoaka ny hevitr’ireo hira kosa izy ireo, miainga avy amin’ny teny anglisy. Mampiasa fomba fiteny fampiasan’ny olona ireo mpandika teny. Mora azo sy mora tadidina izy ireny nefa tsy mivaona amin’ny hevitra ara-baiboly ampitain’ny hira tsirairay.
Adika ara-bakiteny aloha ilay hira amin’ny teny anglisy. Iny avy eo no avadika ho tononkira kanto nefa misy heviny. Vavolombelona manan-talenta amin’ny famoronan-kira no manao izany. Manamarina an’ilay izy ny mpandika teny sy ny mpitsara ny tsipelin-teny, amin’ny farany, sady mijery raha mbola marina tsara ny hevitra ara-baiboly ampitain’ilay hira.
Dibo-kafaliana ireo Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany rehefa nahazo an’ilay fihirana vaovao, ary efa tsindrian-daona ireo mbola tsy manana an’ilay izy amin’ny fiteniny.
Video: “Ity no Lalana”